Fampianarana teknika: hiverina hiasa ireo ECD nefa tsy mbola naharay karama - ewa.mg
News - Fampianarana teknika: hiverina hiasa ireo ECD nefa tsy mbola naharay karama
Efa miverina miasa noho ny
fanomanana ireo fanadinam-panjakana hotontosaina amin’ity taona ity
ireo mpiasa ECD sy “vacataire” eo amin’ny fampianarana teknika sy
ny fanofanana momba ny asa eo anivon’ny sekoly eto amin’ny faritra
Analamanga, araka ny fanambarany. Hatramin’izao anefa, tsy mbola
nisitraka ny karamany ny mpiasa manodidina ny 200 eo ho eo,
nanomboka ny volana oktobra 2019 ka hatramin’izao fotoana izao.
« Mangataka ny hanefana azy iray manontolo fa mahatsapa tena
mijaly izahay, indrindra ao anatin’ny hamehana
ara-pahasalamana », hoy ny solontenan’ny mpiasa.
Hisorohana ny fiverimberenan’ny
olana isan-taona, mangataka ny handraisana azy ireo ho
mpiasam-panjakana raikitra izy ireo. Mahatsapa tena ho voarirarira
ireo mpiasa momba ny valin’ny fangatahana ary efa nanomboka ny
volana janoary no ho mankaty, tsy misy zavatra mazava. Voalaza fa
miandry lalàna nasiana fanitsiana ho an’ny tetibolam-panjakana 2020
ny fanefana ny karama. Rehefa lany ny LFR, nambara indray fa
miandry vola mirotsaka vao azo efaina ny vola. Hatramin’izao, ny
sonian’ny minisitra sisa voalaza fa tsy ampy amin’ny
antontan-taratasy ka very hevitra ireo mpiasa tsy mbola nandray
karama 10 volana.
L’article Fampianarana teknika: hiverina hiasa ireo ECD nefa tsy mbola naharay karama a été récupéré chez Newsmada.
Malagasy miara-miainga: nizara zezika sy masomboly
Mijery sy manohana ny tantsaha. Nizara masomboly sy zezika ho an’ireo tantsaha eny amin’ny distrikan’Avaradrano ny antoko Malagasy miara-miainga, ny faran’ny herinandro teo. « Anisan’ny fitsinjovana ny vahoaka koa ny fanampiana azy amin’ny fiatrehany ny asa fivelomany. Teboka lehibe ao amin’ny foto-kevitra ijoroan’ny antoko Malagasy miara-miainga ny fametrahana fampandrosoana miainga ifotony amin’ny alàlan’ny fampandraisana anjara ny isam-batan’olona amin’izany », hoy ny mpitarika eo anivon’ny birao foibe.Fanamaivanana ireo tantsaha amin’izao fihibohana izaoNanterin’izy ireo fa natao izany mba hanamaivanana ny fiatrehan’ireo tantsaha mpamboly izao hamehana sy fihibohana izao.Nisitraka izany ny distrikan’Avaradranao sy Atsimondrano. Ny any Ambohidratrimo. Tahaka izany koa ny any Manjakandriana sy ny tao amin’ny kaomina Manandriana, Fiaferana, Ambohimanambola, Ambohitrimanjaka, Carion, Ambalavao, Andranonahoatra.Synèse R.L’article Malagasy miara-miainga: nizara zezika sy masomboly a été récupéré chez Newsmada.
Tra-tehaky ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fa­havalo, ny alarobia teo tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany alina ny jiolahy iray avy nanendaka. Vaky nandositra anefa ireo andian-jiolahy vao nahita ireo mpitandro filaminana. «Nitondra moto ny iray tamin’izy ireo ka io no tra-tehaky ny polisy raha tafaporitsaka kosa ny namany», hoy ny fanazavan’ny polisim-pi­renena, loharanom-baovao. Fan­tatra fa avy nanendaka mpivady tetsy Manjakaray tamin’ny moto izy sy ny na­many. Niaraka tamin’ny fitaovam-piadina toy ny sabatra sy ny sakay. Ireo fitaovam-piadiana voatanisa kosa, lasan’ ireo namany tafatsoka, hoy hatrany ny fanazavana voaray. Naman’ny jiolahy atao hoe Raleva ilay olon-dratsy ary nambarany ny misy azy. Raikitra, araka izany, ny fitadiavana ilay jiolahy ka tratra teny Andravoahangy ambony, ny alakamisy teo tokony ho tamin’ny 02 ora sy 30 mn ralehilahy. Mbola tratra niaraka tamina moto halatra ihany koa izy. Voalaza fa isan’ireo andian-jiolahy mpanendaka miaraka amin’ny sabatra eny Manjakaray i Raleva sy ny namany. Manana fitoriana azy avy avokoa ny polisin’ny boriborintany miisa telo. Isan’ izany ny kaomisarian’ny boriborintany fahatelo, fahenina ary fahavalo miampy ny SUT eny Tsaralalana. Ankoatra izay, voasambotra ihany koa ny tovolahy iray 21 taona mpanendaka sady mpangaron-paosy eny Nani­sana. Fantatra ihany koa fa mpifoka rongony 11 isa voasambotry ny polisy teny Man­jakaray, ny herinandro lasa teo. «Izao no atao dia hoentina miady amin’ireo asan-jiolahy eny amin’ny faritra Manjakaray sy ny manodidina iny», hoy hatrany ny polisim-pirenena.Henintsoa HaniL’article Voasambotry ny polisy teny Andravoahangy : mampiasa sabatra sy sakay ilay mpanendaka raindahiny a été récupéré chez Newsmada.
Fiarovana ny varotra: miara-miasa ny seranan-tsambo sy ny fahasalamana
Mitohy ny fidiran’ireo sambo vahiny mitondra entam-barotra avy any ivelany eto Madagasikara. Mifanipaka ny nambaran’ny APMF* sy ny olon-tsotra momba ny fisakanana ny Covid-19. Ny voalohany, milaza fa hentitra ny fanaraha-maso; ny hafa, mahita fa gaboraraka izany. Araka ny antontanisa nomen’ny APMF, nisy 41 ny sambo vahiny niditra teto an-toerana ny volana febroary lasa teo iny, tany amin’ireo seranan-tsambo lehibe eto an-toerana: i Toamasina, Antsiranana, i Nosy Be, i Mahajanga, i Morondava, i Ehoala (Fort-Dauphin), i Sainte Marie, i Vohémar, i Toliara. « Mitondra avokoa entam-barotra avy any ivelany ireo sambo ireo, arahi-maso akaiky tsy hidiran’ny Covid-19 eto an-toerana », hoy ry zareo ao amin’ny APMF. Voalaza fa voarara ny fidiran’ireo sambo mpitatitra mpizahatany, sy ireo karazany hafa fialamboly.Hamafisina ny fanaraha-maso ireo mpanamory tantsambo, eo am-pahatongavana sy am-piaingana eto an-toerana. Tanterahina izany amin’ireo seranana an-dranomasina sy an-dranomamy. Jerena akaiky, araka ny fanamarihan’ny APMF ihany, ny toe-pahasalaman’izy ireo, manomboka amin’ny fitsapana ny hafanan’ny tsirairay. Miara-miasa ny ao amin’ny seranan-tsambo sy ny mpiasan’ny fahasalamana ho fiarovana ny raharaham-barotra. Raha tsy misy izay fiaraha-miasa izay, tsy tonga any amin’ny vahoaka ny varotra. Mahita koa ny APMF fa mitombo ny Covid-19 ka mandray fepetra hentitra izy ireo eny amin’ny seranan-tsambo rehetra. Mandrindra ny asa ny APMF, tsy miova fa mifanaraka amin’ny navoakan’ny fitondram-panjakana.Milaza kosa ny antokon’olona sasany fa tsy misy ny fampiharana fepetra sakana amin’ny aretina Covid-19 eny amin’ny seranan-tsambo. Ny ao amin’ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo izao, efa hentitra ihany amin’ny tranga sasany izay mampanahy ny maro. “Tsy azo antoka avokoa ny sambo avy any ivelany miditra eto”, hoy ny mpiasan’ny fadintseranana sasany. Na amin’ireo seranan-tsambo lehibe aza, indrindra fa any amin’ny seranan-tsambo madinika tsy ampy fitaovana, mampanahy ny fidiran’ny Covid-19. R.Mathieu APMF*: Agence portuaire maritime et fluvialeL’article Fiarovana ny varotra: miara-miasa ny seranan-tsambo sy ny fahasalamana a été récupéré chez Newsmada.
Réponse du berger à la bergère ? Au lendemain de la sortie récréative, l’ancien ministre de la Communication, notamment durant le régime bleu de Rajaonarimampianina, a reçu sa convocation hier par la gendarmerie. Il sera entendu par la police judiciaire de la brigade des recherches criminelles, à Fiadanana, ce jour. Aucune information ne filtre pour l’instant mais il est certain qu’il pourrait s’agir de ses propos durant l’émission commune « Miara-manonja » qui en est le motif. Le fait que la gendarmerie ait notifié l’ordre professionnel des journalistes afin d’assister à l’audition laisse penser à un éventuel délit de presse. Une des ferventes figures de l’opposition, Andrianjato Vonison Razafindambo fait partie des animateurs et chroniqueurs de l’émission politique « Miara-manonja », diffusée sur plusieurs chaînes, au même titre que les députés Hanitra Razafimanantsoa et Fidèle Razara Pierre. Cette émission devenue un rendez-vous phare de l’opposition, plusieurs dossiers y sont dénoncés et parfois avec des preuves inattendues. Les trois mousquetaires du « Miara-manonja » n’ont pas mâché leurs mots pour révéler, selon eux, un dysfonctionnement total du système de gouvernance du pays. Des propos qui gênent, surtout quand l’émission devient un moyen de communication pour les organisations événementielles de l’opposition, dont récemment la sortie récréative à Imerinkasinina. Après sa fonction ministérielle, Vonison Andrianjato est redevenu journaliste auprès de la chaîne Soa Radio dont il est également le légataire de la licence d’exploitation. Il est le second ministre de la Communication à être sur la sellette depuis l’année dernière. Alors que son prédécesseur Harry Laurent Rahajason alias Rolly Mercia se bat bec et ongles pour sa libération par la Cour d’appel, une saga judiciaire commence pour Andrianjato. Ceci dit, le fait d’avoir été porte-parole officiel du gouvernement a aussi ses revers politiques, une fois qu’on ne l’est plus. Dans le pays, les deux franges (pro et contre le régime) ont maintenant chacune son émission politique, majoritairement animée par des journalistes. S’agit-t-il d’une nouvelle forme de liberté de presse ou d’un pure mercenariat politique via le journalisme ? Les avis restent divisés sur ce sujet… D.R L’article « Miara-manonja » : Andrianjato Vonison convoqué par la gendarmerie est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article « Miara-manonja » : Andrianjato Vonison convoqué par la gendarmerie a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Valo no nosamborin’ny zandary ary nidoboka am-ponja avy hatrany rehefa natolotra ny fampanoavana. Ny anton’izany, dia noho ny fisamboran’ireo vehivavy iray izay nolazaina fa mpamosavy. Ny mpikamban’ny Dinabe tao Besaboha no nanatontosa an’izany ary tsy vitan’izany fa mbola ireo koa no nanao ny famotorana an’ilay olona. Izany hoe noraisin’ireo tanteraka izany ny asan’ny mpitandro ny filaminana. Nahavita nampandre ny manampahefana tao an-toerana ny fianakavian’ilay ramatoa ; izay notànana an-keriny. Ny ampitson’izany no tapaka ny hevitra ny amin’ny hisamborana ireo mpikamban’ny Dinabe. Nisy valo tamin’ireo 11 izay tompon’antoka no azon’ny zandary ary nidoboka am-ponja avokoa izy ireo. Olana eto amintsika ny fampiharana ny Dinabe noho ny antony ohatr’izao. Ankoatry ny fanamparam-pahefana ataon’ny mpikambana ao anatiny, dia lasa sehatra iray mitady hanitsaka ny asan’ny mpitandro ny filaminana koa izany. Very ny olona matetika rehefa misy ny olana izay mitranga : ny voalazan’ny Dinabe ve no tokony hampiharina sa ny lalàna manan-kery kosa? Tamin’ity raharaha ity, raha araka ny fanazavan’ny zandary, dia sady notazonina an-keriny ilay ramatoa no nangalana vola mitentina 920.000 ariary . Nitarika ny fivorian’ny manam-pahefana rehetra tao an-tanàna ny raharaha rehefa nampandrenesina ny sefo distrika. Rehefa vita ny fisamborana ire olona, dia nentina lavitra niala ny tanàna izy ireo mba hialàna amin’izay mety ho fitsaram-bahoaka hitranga na koa valifaty hataon’ny namany. Miteraka olana lehibe rehefa tsy voafaritra tsara ny anjara asan’ny Dinabe sy ny rafitra tokony hipetrahan’izany. Na ireo olona ao anatiny aza, dia mahatsiaro azy ireo ho manam-pahefana sy tsy refesi-mandidy ary dia lasa manaonao foana aza indraindray. Etsy andanin’izany koa anefa, tsy afa-miala amin’izy ireo ny mpitandro ny filaminana, satria vitsy loatra izy ireo ary dia ireo no manampy rehefa misy asan-dahalo sy fanarahan-dia. D.RL’article Tsaratanàna : Nidoboka am-ponja ny mpikamban’ny Dinabe a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fiparitahana fitaovam-piadiana :: Ravan’ny Zandarimaria ny toerana iray fanamboarana basy
Tra-tehak’ireo zandary miasa any amin’ny tobim-paritra Isoanala, any Betroka, tamin’ny 9 aogositra lasa teo, ny toerana iray fanamboarana basy. Mbola hita tao ny basy karazany maro, teo an-dalam-panamboarana sy efa vita, miaraka amin’ireo fitaovana fanamboarana azy. Tsy hita kosa ny tompon’antoka. Toerana iray mpamatsy basy an’ireo dahalo any Betroka sy ny manodidina ity saron’ireo mpitandro filaminana ity, araka ny loharanom-baovao. Lehilahy iray antsoina hoe Ratà no voalaza fa tompony sy mpanamboatra ireo basy vita tanana. “Rehefa nahazo loharanom-baovao izahay momba ny fisian’io toerana io dia nijery ny zava-nisy. Hita tao ireo basy an-dalam-pandrafetana sy basimborona tsy misy taratasy miisa roa. Misy lehilahy iray rahalahin’io Ratà io no voasambotra tao amin’ilay trano”, hoy ny fanazavan’ireo zandary any an-toerana. L’article Fiparitahana fitaovam-piadiana :: Ravan’ny Zandarimaria ny toerana iray fanamboarana basy est apparu en premier sur AoRaha.
Angaredon’ireo depiote any Fianarantsoa: “Mijanona ho filohan’ny Antenimiera ihany i R. Christine”
Nitsipaka marindrano tsotra izao. Namaly bontana ny feo niely tato ho ato ireo olom-boafidy, indrindra fa ireo depiote any amin’ny faritanin’i Fianarantsoa. “Tsy marina ary tsy mitombina velively ny feo aely sy ilazana fa tokony ho mpikambana na ho filohan’ny HCC ny filohan’ny Antenimierampirenena, Razanamahasoa Christine. Mijanona amin’izany toerana izany ihany izy”, hoy ny solontenan’ireo olom-boafidy, ny depioten’i Vohibato, Randrianatoavina Jean Martin. Namboly hazo sady nifampiarahaba noho ny taona vaovao tany Fianarantsoa ireo mpikambana TGV/Mapar ireo ary naneho hevitra momba ny raharaham-pirenena.Nolanin’ireo depiote 100% Razanamahasoa ChristineAnisan’izany izao fanehoan-kevitra ho tsy fanekena ny hanesorana amin’ny toerany ka hamindrana ity depioten’Ambatofinandrahana any Amoron’i Mania ity hiala etsy Tsimbazaza ary hikisaka eny Ambohidahy. “Mbola sarotra sy dingana lavabe ny fanesorana azy amin’izany toerany izany”, hoy ihany izy.Tsiahivina fa nolanin’ireo depiote 100% ho filohan’ny Antenimierampirenena izy io ary samy nifidy azy avokoa na ny mpanohitra Tim na koa ireo tsy miankina. Araka izany, tombanana fa mety misy ambadika politika, te hanilika azy sy miketrika ny haka ny toerany eny an-dapa izany amin’ireo depiote maro anisa ireo?Synèse R.L’article Angaredon’ireo depiote any Fianarantsoa: “Mijanona ho filohan’ny Antenimiera ihany i R. Christine” a été récupéré chez Newsmada.